Proverbe Afatotra maninton-tady, ampandehanina tsy afaka. [Rinara 1974]
Proverbe Fatakana afak’ ando, mivika tsy amin’ aretina. [Samson 1965 #F19]
Proverbe Fita-mora tsy afaky ny omby. [Cousins 1871 #970, Rinara 1974]
Proverbe Langato nandro, dronga nisetra : ny lailay afaka fa ny taketra tavela. [Samson 1965 #L27]
Proverbe Mandehana dieny malaina, fa raha mazoto tsy afaka. [Cousins 1871 #1582]
Proverbe Masom-poza : malala-tsy afaka. [Samson 1965]
Proverbe Miohatra ny tokonana tsy afaka, ka miohatra ny rindrina vao afaka ! [Houlder 1895]
Proverbe Nify sy molotra, ka ny mahery no afaka aloha. [Houlder 1895 #382]
Proverbe Ny mangidihidy tsy afaky ny lavitra. [Rinara 1974 #3114, Cousins 1871 #2326]
Proverbe Nivadika ny rasa, fa ny atiny no afaka aloha. [Veyrières 1913 #2732, Cousins 1871 #2111]
Proverbe Ny varavarana tsy afaka ka ny rindrina hindahana. [Samson 1965 #N18]
Proverbe Ombalahy aho afaka teo. [Houlder 1895 #811]
Proverbe Tsy misy hidy tsy afaka alàna, na hena tsy afaka am--bilany. [Rinara 1974 #4714, Cousins 1871, Houlder 1895, Veyrières 1913, Nicol 1935]